Ribbit Rewards စျေး - အွန်လိုင်း RBR ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Ribbit Rewards (RBR)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Ribbit Rewards (RBR) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Ribbit Rewards ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Ribbit Rewards တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Ribbit Rewards များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
Ribbit RewardsRBR သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0129Ribbit RewardsRBR သို့ ယူရိုEUR€0.011Ribbit RewardsRBR သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0099Ribbit RewardsRBR သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0118Ribbit RewardsRBR သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.115Ribbit RewardsRBR သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0816Ribbit RewardsRBR သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.286Ribbit RewardsRBR သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0481Ribbit RewardsRBR သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0171Ribbit RewardsRBR သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0181Ribbit RewardsRBR သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.287Ribbit RewardsRBR သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.1Ribbit RewardsRBR သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0694Ribbit RewardsRBR သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.968Ribbit RewardsRBR သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.2.18Ribbit RewardsRBR သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0178Ribbit RewardsRBR သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0198Ribbit RewardsRBR သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.402Ribbit RewardsRBR သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0899Ribbit RewardsRBR သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥1.38Ribbit RewardsRBR သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩15.33Ribbit RewardsRBR သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦5.01Ribbit RewardsRBR သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.948Ribbit RewardsRBR သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.355
Ribbit RewardsRBR သို့ BitcoinBTC0.000001 Ribbit RewardsRBR သို့ EthereumETH0.00003 Ribbit RewardsRBR သို့ LitecoinLTC0.000238 Ribbit RewardsRBR သို့ DigitalCashDASH0.000143 Ribbit RewardsRBR သို့ MoneroXMR0.000145 Ribbit RewardsRBR သို့ NxtNXT1.01 Ribbit RewardsRBR သို့ Ethereum ClassicETC0.00191 Ribbit RewardsRBR သို့ DogecoinDOGE3.73 Ribbit RewardsRBR သို့ ZCashZEC0.000157 Ribbit RewardsRBR သို့ BitsharesBTS0.399 Ribbit RewardsRBR သို့ DigiByteDGB0.414 Ribbit RewardsRBR သို့ RippleXRP0.0459 Ribbit RewardsRBR သို့ BitcoinDarkBTCD0.000446 Ribbit RewardsRBR သို့ PeerCoinPPC0.0429 Ribbit RewardsRBR သို့ CraigsCoinCRAIG5.89 Ribbit RewardsRBR သို့ BitstakeXBS0.552 Ribbit RewardsRBR သို့ PayCoinXPY0.226 Ribbit RewardsRBR သို့ ProsperCoinPRC1.62 Ribbit RewardsRBR သို့ YbCoinYBC0.000007 Ribbit RewardsRBR သို့ DarkKushDANK4.15 Ribbit RewardsRBR သို့ GiveCoinGIVE28.02 Ribbit RewardsRBR သို့ KoboCoinKOBO2.95 Ribbit RewardsRBR သို့ DarkTokenDT0.0119 Ribbit RewardsRBR သို့ CETUS CoinCETI37.37